Fiompiana – Ahazoana tombony avo roa heny ny fampanarahana kisoa entin-tanana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fiompiana – Ahazoana tombony avo roa heny ny fampanarahana kisoa entin-tanana
Notokanana omaly teny Nanisana ny toeram-pitiliana vaovao momba ny fanatsarana ny taranaka kisoa
Tosika ho an’ny fiompiana kisoa. «Mbola maro ny mpiompy kisoa tsy resy lahatra amin’ny fampanarahana entin-tanana, na ny fampidirana tsirin’ain-kisoa lahy voafantina amina kisoa vavy. Maro lafy ary ahazoana tombony be anefa ny fampiharana azy», hoy Andrinantenaina Jean Noël, mpiompy kisoa any Imerin- tsiatosika, sady teknisiana momba ny fiompiana kisoa ary nahazo tombony tamin’ ny fampiharana ity teknikam- piompiana iray ity.
«Mihena kokoa ny fotoana fiompiana. Dimy na enim-bolana iompiana dia mahatafavoaka kisoa milanja 120 kilao raha manao ny fampanarahana entin-tanana. Raha fampanarahana tsotra anefa dia sivy ka hatramin’ny 10 volana vao azo izany», hoy ny fana- zavany. Mihena noho izany ny mason-karena amin’ ny sakafo.
«Voafehy ary voasoroka ny mety ho fifindran’ny aretina. Manantombo ka mety hihoatra ny 12, ankoatra izany, ny isan’ny zana-kisoa teraka ary azo antoka ho tsara kokoa ny kalitaon’ ny hena», hoy indray Rakotondrahanta Solofoniaina, Talen’ny sampan-draharaha Malagasy matihanina momba ny fiompiana (Mpe). «Iray volana sy tapany dia efa mahatafavoaka zana-kisoa milanja 20 kilao nampiasana ny fampana- rahana entin-tanana, raha dimy kilao monja no azo mandritra io fe-potoana io amin’ny fampanarahana tsotra», hoy ihany io tompon’andraikitra io.
Notokanana omaly, teny amin’ny Mpe Nanisana, ny toerana fitsirihana ny hatsaran’ny tsirin’ainan-kisoa lahy. Toeram-pitiliana voalohany momba ny fampanarahana entin-tanana ny kisoa eto Madagasikara. Manaraka ny fenitra takina mifandraika amin’izany ny fitaovana ampiasaina ao amin’ity toeram-pitiliana vaovao ity. Ar 60 000 no ivarotana ny tsirin’aina voafantina sy voatily ho an’ ny fampanarahana entin-tanana, fatra ho an’ny kisoa vavy iray.
TAPATAPANY FANJARIAN-TSAKAFO Anosy, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany, Amoron’i Mania, Androy. Ireo no faritra tena marefo amin’ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fanjarian- tsakafo. Nahazo 12,5 tapitrisa euros hamatsiana ny fandaharan’asa hetsika ho an’ny fanjarian-tsakafo sy ny sakafo (Aina) ireo faritra ireo. Tokantranona tantsaha mpamokatra 150 000 no kendrena hahazo masomboly nohatsaraina, hampitàna teknikam-pambolena manaraka ny toe-tany, hampianarina hanao voly samihafa hatramin’ny famoronana loharanom- bola maro sy ny fanatsarana
OLAN’NY FIOMPIANA KISOA-Tsy maharototra ny ady amin’ ny fampiasana antibiotika Hatramin’izao dia mbola tsy hita mazava ny fepetra noraisina sy nampiharina mahakasika ny loza mihatra amin’ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fampiasana fanafody ampiasaina amin’ny fanabeazana aizana sy ny antibiotika amin’ny kisoa ompiana eto amintsika. Nohamafisin’ny fitsirihana natao sy namoahana vokatra ny volana jona teo, raha ny vaovao azo teo anivon’ ny foibem-pitondrana misahana ireo sampan-draharaha misahana ny fitsaboana biby (Dsv) eo anivon’ny minisiteran’ny Fiompiana, fa mahatratra 35% ny tahana fanafody fampiasa amin’ny fanabeazana aizana hita tamin’
FIVOARAN’NY TEKNOLOJIA-Azo iseraserana amin’ny tranonkala koa ny fahitalavitra amin’ny zanabolana Tsy hianona amin’ny fijerena ireo fahitalavitra intsony. Manomboka izao dia afaka hiserasera amin’ny tranonkala, amin’ny alalan’ ilay fomba iray ka hijery ireo sarimihetsika sy hihaino ireo mozika efa ao an-tokantrano ireo mpanjifan’ny Blueline. Nampa­hafantarin’ity orinasa ity tamin’ny fomba ofisialy omaly ny vokatra vaovao mifandraika amin’izany. Toy irony fitaovana mpandika soramiafina na «décodeur», izay vokatra teo aloha ihany, ny fitaovana ampiasaina, saingy nitondran’ny orinasa fana­tsarana maro raha ny fanazavan’ireo mpiandraikitra ny varotra eo anivon’ny Blueline. «Satria Android no ampiasaina dia afaka misokatra amin’ireo fitaovana toy ny “tablettes” sy ireo “Smartphone” io mpandika soramiafina io. Izany hoe azo jerena eo amin’ny fahitalavitra ny sary na rakikira na horonantsary ao anatin’ireny fitaovana ireny. Azo ampiasana “disque dur” mihoatra ny 750 Go ihany koa ity mpandika soramiafina ity», hoy i Matthieu Mertian, talen’ ny varotra eo anivon’ny Blueline. HNA
FIFANARAHAM-PIARAHA-MIASA-Nahazo mpanohana vaovao ny hetsika ara-barotra Grande Braderie Fampitomboana sy fandrisihana ny mpanjifa. Tontosa omaly maraina, tetsy amin’ny Hotel Colbert, ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny tompon’ andraikitry ny Microcred Banque Madagascar sy ny mpitantana ny Mada Vision. Manomboka izao dia ho mpanohana ofisialy ny Grande Braderie de Madagascar io orinasa mpampindram-bola io. Tanjon’ny roa tonta ny hampahafantatra misimisy kokoa ny mpanjifa momba ireo tolotra samihafa omen’ny Microcred, mandritra ny hetsika. Isan’izany ny fanamorana ny fikarakarana ny antontan-taratasy sy ny fahamoran’ny zana-bola. «Ny sokajin’olona rehetra dia afaka mindram-bola sy manao petra-bola eo anivon’ny Microcred. Efa misy 22 ireo sampana manera­na ny Nosy ankehitriny ary hitombo dimy izany amin’ny taona 2014», hoy i Barnabé François, Tale jeneralin’ny Microcred. «Mitovy ny tadin-dokanga ka nahatonga ny fiaraha-miasa matotra. Ny tanjona dia ny hahafahana manampy ireo mpanjifan’ny Grande Braderie sy ny mpandraharaha miara-miasa amin’ny Mada Vision amin’izao fanohanana izao», hoy kosa i Harilala Ramanantsoa, mpitantana ny Mada Vision. Tojo Rakotomalala
Fiompiana, Mpanoratra Rijakely, 06.10.2012, 08:38	FIARAHAMONINA
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	OLANA AMIN’NY FAHITANA-Tovolahy menatra ny manodidina tsy nivoaka ny trano nandritra efa-taona FIAROVANA NY ZON’OLOMBELONA-Hamolavola tolo-kevitra ho an’ny governemanta vaovao ny tetezamita
OLAN’NY HERINARATRA-Faritra maro eto an-drenivohitra no tsy manana jiro
Pierrot Rajaonarivelo-« Ny tsy hiverenan’ny didy jadona no hanohanako an-dRajaonarimampianina »